Ukubukeza Okumnandi Okumnandi: I-THELMA - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Ukubukeza Okumnandi Okumnandi: THELMA
Ukubukeza Okumnandi Okumnandi: THELMA
by UTrey Hilburn III October 13, 2017
ebhalwe ngu UTrey Hilburn III October 13, 2017
Igama elithi slow-burn aliyisijwayelo kuzethameli zeFantastic Fest. Amafilimu amaningi adudula imvilophu ngokusebenzisa izindlela ezithokozisayo zokuthakatha izethameli, ngenkathi futhi isebenza ekuthuthukiseni umlingiswa onamandla. Thelma ingenye yalawo mafilimu. Kuthatha isikhathi sayo ukwenza iphuzu, kepha njengamafilimu amaningi ashisa kancane avela ku-fest, isebenzisa leyo ndlela ukwenza isipiliyoni semizwelo esime ngokuphelele futhi esizokushiya uphefumula kanzima.
Thelma kulandela intombazanyana egama layo lelo, elibhekise amabombo eNyuvesi. Njengabantu abaningi abasha abaya emaphethelweni aphezulu okuphila kwamahhala kwabazali, ufinyelela ezingeni lokushintsha nokuhlola. Ngemvelaphi yenkolo esindayo, umbono wakhe wangaphakathi nombono wokuqala wenkululeko yeqiniso uqala ukuvusa izinto ngaphakathi kwesokunxele sakhe eside esingasebenzi. Ngakho-ke, ngokuthola uthando lwakhe lokuqala, futhi uqala ukuvusa okuthile okunamandla futhi okungenzeka kuyingozi ngaphakathi kuye.
Ifilimu yinhle ngokuphelele kububanzi bayo futhi igqoka inhliziyo yayo emkhonweni wayo ukuthola ulwazi lwe-cinema. Kusetshenziswa inqwaba yamashothi abanzi agcizelela ukusetshenziswa kwesikhala esingesihle ukukhombisa umhlaba kaThelma obanda kakhulu. Abalingisi kulokhu bahle kakhulu kangangokuba ukuhamba ngesinye isikhathi-kweqhwa kwamukelwa nge-100%. I-chemistry yabo esesikrinini isebenza futhi iyaheha futhi ivusa inkanuko. Ifilimu kungenzeka ukuthi ibikhuluma ngalawa mantombazane amabili edla isemishi futhi ephuza ikhofi isikhathi esingamahora amabili futhi ngabe ngisaqhubeka nokugibela. Umqondisi, uJoachim Trier ngokusobala uletha inhlanganisela yakhe ehlukile yokugxila kwezinhlamvu emsebenzini wakhe wangaphambilini kumafilimu afana nalawa Oslo futhi Buhle Kunamabhomu. Iso lakhe nendlebe yokuhlanganisa abalingisi bakhe nokulandisa okuzungezayo kuhamba phambili kuwo wonke umsebenzi wakhe futhi kunwetshwe kuye Thelma lapha. Nginethemba lokumbona esebenza ngezinto eziningi zohlobo oluthile esikhathini esizayo njengoba ebonakala enezinga lokududuza ngokwemvelo ngokwenza njalo.
Le filimu idlala njengomlingiswa wamahlaya we-antihero Marvel ngesikhathi sokusebenza kwayo. Uma ungacabanga indaba yomsuka ngokuphelele kaJean Grey's Dark Phoenix, kungaba njalo. Futhi emhlabeni lapho ama-FX's ibutho kanye nokuzayo AmaNew Mutants bahlela izindlela ezintsha kumabhayisikobho amahlaya / imibukiso yencwadi yamahlaya, lokhu bekuzolingana kalula. Imvelo yokuguqula amandla kaThelma namandla okuvuka kuvula umlando wobumnyama obudlulayo phakathi nefilimu.
Thelma kwangishiya ngicabanga. Ukusetshenziswa kwayo ngokucophelela kwesikhathi sayo sokuqalisa ukuze kusungulwe abalingiswa bayo futhi nobudlelwano babo busetha ama-dominoes engxenyeni yesibili ukuze bawe ngobuciko obuqondile be-opera. Ukulandisa kwayo kubamba amakhadi ayo eduze kwesifuba sayo njengoba isambulo ngemuva kwesambulo sivuliwe, ngenkathi konke kusenzeka ngasikhathi sinye ukugoqa imicu yengebhe yakho okuzungezile. Thelma ihlakaniphile, iyabheda futhi iyababa ngokuphelele.
Chaos UyabusaFest EmnandiThelma
'Ubusuku BukaDeveli' Uhambo Lomenzi Wefilimu Lokuya Esihogweni
ITrailer New Mutants iyethusa okuhle